५ सय ५८ वर्षपछि श्रावण महिनामा यस्तो संयोग, ४ राशिलाई फाइदा – Khabar Silo
नेपाली पञ्चाङ्गअनुसार साउन चौथो महिना हो । संस्कृतको श्रावण महिना अपभ्रंश भएर नेपालीमा साउन भएको हो । शास्त्रमा साउनलाई मासोत्तम मास अर्थात् सबैभन्दा उत्तम महिना भनिएको पाइन्छ । साउनको सुरुको दिन अर्थात् संक्रान्तिलाई विशेष महत्व दिइएको पाइन्छ किनभने यसै दिनदेखि सूर्य दक्षिणायन हुन्छ र दिन छोटा अनि रात लामा हुन थाल्छन् जुन क्रम माघेसंक्रान्तिसम्म रहन्छ । ज्योतिष विज्ञानअनुसार साउन अर्थात् श्रावण महिनाको पूणिर्माका दिन आकाशमा श्रवण नक्षत्रको योग निर्माण हुन्छ । त्यसैले यो महिनाको नाम श्रावण रहेको हो ।
ज्योतिषहरुका अनुसार सयौ वर्षपछि श्रावणमा अ’द्भु’त संयोग बनेको छ । श्रावण महिनामा ५ सय ५८ वर्षपछि ४ वटा ग्रहको व’क्र योग परेको छ । श्रावण महिनामा योपटक गुरु, शनि, रा’हु तथा केतुको ब’क्र परेको छ । अर्थात यी ग्रहहरुको चाल उल्टो हुनेछ ।
५५८ वर्ष पहिला पनि गुरु शनि राहु के’तु एक साथ श्रावण महिनामा आएका थिए । त्यस समय गुरु स्वयंको राशि धनुमा वक्र, शनि आफ्नो राशि मकरमा वक्र, राहुन मिथुनमा र केतु धनू राशीमा ब’क्र भएको थियो ।
४ ग्रहको ब’क्र योगले तपाईको राशिमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
मेष : श्रावणको महिनामा मेष राशि भएकाहरुको साहस र पराक्रम बढ्नेछ । सम्पर्क र सामाजिकता राम्रो हुनछ । घर परिवारमा सुख शान्ती र सहजता हुनेछ । भवन, वाहनको अभिलाषा बढ्नेछ । कार्यक्षेत्र सँग सम्बन्धित महत्वूर्ण कामम पूरा हुनेछन् ।
वृष : वृष राशिका लागि पनि श्रावण महिना राम्रो हुनेछ । यो पटक चार वटा सफलता तर्फ वृष राशि भएकाहरु उन्मुख हुनेछन् ।
राम्रो आयोजनामा प्रमुखताका साथ सहभागीता, धर्म संस्कार र अनुसन्धानमा सफता । महिनाको सुरुवातामा नयाँ साधनमा ध्यान जानेछ । वाणी व्यवहारको प्रभाव बढ्नेछ । महिनाको अन्तिममा साहस र पराक्रमले नयाँ सफलता हात पर्नेछ ।
मिथुन : श्रावण महिना केही नयाँ उपलव्धि आर्जित गर्न सहायक हुनेछ । स्वास्थ्यलाई भने ध्यानमा राख्नुपर्नेछ । नियमअनुशासन अपनाउँदा फाइदा पुग्छ । सक्रियताको लाभ हुनेछ । प्रशासनिक काममा सपफता मिल्छ । बोल्नु भन्दा धेरै काम गरेर देखाउनुहोस् । महिनाको शुरुवातमा मेहनतको बलमा अअपेक्षित सफलता हात पर्ने छ भने उत्तरार्धमा रहन सहन र खानपानमा ध्यान दिन आवश्यक छ । यो महिनामा तपाईको निर्णय क्षमता बढ्नेछ ।
कर्कट : यो राशि भएकाहरुलाई श्रावण महिना उत्तरोत्तर शुभकारक छ । मेहनत लगन तथा दूरदर्शी लागानीले अपेक्षित परिणाम दिनेछ । यी राशि भएकाले यो महिना सक्रियता बढाउनेछन् भने अनुशासनमा जोड दिनेछन् । महिनाको सुरुवातमा खर्च वृद्धि हुनेछ । चाप्लुसी गर्नेहरुबाट सर्तक हनु होला । उत्तरार्धमा आर्थिक रुपमा सफता प्राप्त हुनेछ । क्रो’धलाई नियन्त्रण गर्नुभएन भने समस्या देखिने योग छ ।
धनु : यो महिना घरपरिवारसँग सामिप्यता बढ्नेछ । साथीको भनाइलाई महत्व दिनुपर्ने देखिएको छ । दाम्पत्यमा पारदर्शिता तथा प्रेम बढ्नेछ । कुनै पनि कामका लागि राम्रो प्रस्ताव प्राप्त हुने सम्भावना रहेको छ । पूर्वार्धमा करियर कारोबारमा व्यस्तताले सम्झौताका लागि प्रेरित गर्नेछ । उत्तरार्धमा गरिमा, गोपनीयतालाई ध्यान राख्नुपर्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य प्रभावित बन्न सक्छ ।
पूर्वार्धमा जिद्दी र पूर्वाग्रहबाट बच्नुहोस् । उत्तरार्धमा व्यक्तिगत प्रदर्शनमा सुधार आउनेछ । दाम्पत्य जीवन शुखमय हुनेछ ।
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस प्रमुख पात्र भ्यागुतो भएका लोककथा र बालकथाहरू अनगिन्ती छन्। तर ‘वैज्ञानिक प्रयोगमै आधारित’ भनिएको र व्यापकरूपमा सुन्ने–सुनाइने गरेको एउटा कथा भने अत्यन्त त्रासदमात्रै होइन हामी सबैलाई तर्साउने र बिउँझाउने चरित्रको छ। धेरैलाई कन्ठस्थ होला यो कथा– म आज फेरि पनि त्यही कथा सम्झँदैछु।एउटा […]
Posted on November 23, 2020 November 23, 2020 Author khabar silo
सुत्नुअघि जलाउनुहोस् एउटा तेजपत्ता, ५ मिनेटमै देख्नुहुनेछ चत्कारी फाइदा